Gubi madax saliid gubi galaas qaloocsan tube| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Saliida galaaska madaxa/maddiibadaha
Saliida galaaska madaxa/maddiibadaha
Madaxa galaaska gubi saliidda
Kuwani waa maddiibadahaaga oo la isticmaali karo marka la dhuuqaayo saliidaha ama saliidaha, qaabeynta aasaasiga ahi waa tuubo qafiifiyaha saliidda qalooca oo ka samaysan dhalada borosilicate taas oo ah madaxaaga gubta ee ku fadhiya boong -gaaga ama dab -damiskaaga.
Madaxa gubiyuhu wuxuu leeyahay isku xirnaan cabbirkoodu caadi yahay oo magac ahaan ah 10mm, 14mm iyo 18mm kuwani waxay noqon karaan kala -goysyada lab ama dheddig.
Farqiga u dhexeeya madax kasta oo wax guba wuxuu ku yimaadaa naqshadeynta iyo soo saaridda. Madaxyada gubashada saliidda galaaska qaro weyn ayaa xoogaa ka xoog badan, si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaadan kululeyn baaquli maaddaama muraayadda ay xajineyso kuleylka oo ay gubi karto waxa ku jira. Baaxadda weelka iyo cabbirka daloolka ayaa isbeddel ku sameeya wareegga hawada.
Dhawr arrimood oo ay tahay in la tixgeliyo marka la iibsanayo madaxa gubi saliidda galaaska qalooca ...
Waxaa kaloo lagu yaqaan magacyo kale oo ay ka mid yihiin:
gubidda saliidda galaaska qalooca
galaas qoorta surwaalka
Haddii aad ugu yeerto wax ka duwan, noo soo sheeg.
Fiiri dhammaan 10 mm Dheddig 10 mm lab 14 mm Dheddig 14 mm Lab 18 mm Dheddig 18 mm Lab Madaxa Bong galaas borosilicate Clear saliidda qalooca xiriirinta dumarka xiriirka lab saliida gubta Muraayadda gubta saliidda